माघ २०, २०७४ शनिवार १२:४४:००
तरकारीका रुपमा प्रयोग गरिने च्याउ ‘ढुसी’ प्रजातिभित्र पर्छ । च्याउ जस्तो रङहीन तरकारीले पनि हाम्रो खानामा प्रसस्त मात्रामा भिटामिन र खनिज पदार्थ प्रदान गर्छ । खानपानले विभिन्न रोगहरु लाग्न नदिन र निराकरणमा मद्दत गर्ने त सबैलाई थाहै छ । त्यस्तै, च्याउको सेवनले प...
माघ १४, २०७४ आइतवार १३:५९:००
खाँदा तीतो भए पनि करेला स्वास्थ्यका लागि अतिलाभदायक छ । करेलाका केही फाइदा यस्ता छन्ः – शरीरमा कफ जम्मा भएमा करेला खानुपर्छ । करेलामा पाइने फस्फोरसले शरीरको कफ निकास गर्न सघाउ पुर्या‍उँछ । – करेलाले पाचनशक्ति बलियो बनाउँछ र भो...
यसकारण खानुपर्छ रायोको साग
माघ १२, २०७४ शुक्रवार १५:१०:००
– रायोको सागमा भिटामिन–ए प्रशस्त पाइने भएकाले यसले रतन्धोलगायत रोगबाट केटाकेटीलाई बचाउँछ । – रुघा लागेमा रायोको दाना पिसेर यसलाई महमा मिसाई सुँघ्नाले सञ्चो हुन्छ । – पाचनशक्ति क...
माघ १, २०७४ सोमवार १९:४४:००
ग्रिन टी अक्सिडाइज नगरिएका पत्तीबाट बनाइन्छ र प्रशोधन पनि कम हुन्छ, त्यसैले यसमा एन्टिअक्सिडेन्ट तत्व बढी हुन्छ र लाभकारी प्राकृतिक तत्व पोलिफेनल हुन्छन् । ग्रिन टी भारत र चीनमा रगत रोक्न, घाउ निको पार्न, पाचन प्रणालीलाई मजबूत पार्न, मुटु तथा मानसिक स्वास्थ्य तथा शरिरको ता...
पुस ३०, २०७४ आइतवार १६:०९:४१
आँखाको ज्योती राम्रो बनाउन घरेलु खानेकुरामा ध्यान दिन आवश्यक छ । पावरवाला चस्मा लगाउनेले समेत यी खानेकुरा खाने हो भने दृष्टिमा सुधार आउने अध्ययनले देखाएको छ । त्यसकारण घरमै पाइने यी सामग्रीबाट प्राकृतिक रूपमै आँखाको ज्योति राम्रो बनाउनुहोस : हरियो तरकारी...
पुस १६, २०७४ आइतवार ११:४९:००
१. पाचन सुधार्छ पाचनलाई सुधार्नका लागि बिहान तातो पानीमा मह र कागती मिसाएर खानुपर्छ । यसले पेट सफा राख्न मद्दत गर्नुका साथै कलेजोमा रसको उत्पादनलाई बढाउँछ, जसबाट पाचन प्रक्रियामा मद्दत मिल्छ । कागतीमा रहेको एसिडले पाचनप्रणालीलाई मजबूत पार्न मद्दत गर्छ र अवान्छित वि...
पुस १४, २०७४ शुक्रवार १९:१७:००
सकेसम्म धेरै फलफूल र सागसब्जी खानु स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक भएकोमा कुनै शंका छैन । तर हामीले खाने यस्ता फलफूल र तरकारीको बोक्रा छोडाएर खानु कति फाइदाजनक छ विचार गर्नु पनि आवश्यक भएको पोषणविद् बताउँछन्। कीटनाशक औषधिको कुप्रभावबाट जोखिन वा देखासिकी वा बानीका कार...
पुस १२, २०७४ बुधवार १५:०१:१४
कतिपयमा चिसोमा सुन्तला खानु हँदैन भन्ने धारणा छ । तर चिसो मौसम र चिसो ठाँउमै फल्ने सुन्तलाको महत्व छुट्टै छ । सुन्तला स्वादकालागि मात्र नभइ स्वास्थ्यका हिसाबले पनि अत्यन्तै लाभदायक छ । मानिसहरू सुन्तलाभन्दा भिटामिन चक्कीतिर आकर्षित भइरहेका छन् । सुन्तला भिटामिन ‘सी&...
भान्सामै औषधी: दुखाई कम गर्ने घरेलु खानपिन
पुस ११, २०७४ मगलवार १६:२०:२४
अदुवा– मांसपेशीको दुखाईका लागि अदुवामा गिंगेरोल्स नामक तत्व पाइन्छ, जसले दुखाई गराउने हर्मोन उत्पादनलाई रोक्छ । अनुसन्धानकर्ताका अनुसार दैनिक एक चम्चा सुकेको अदुवा वा दुई चम्चा काटेको अदुवा समावेश गर्नुपर्छ । ल्वाङ– दाँत दुखाईका लागि दाँत य...
पुस ११, २०७४ मगलवार १६:१५:५२
– रायोको सागमा भिटामिन–ए प्रशस्त पाइने भएकाले यसले रतन्धोलगायत रोगबाट केटाकेटीलाई बचाउँछ । – रुघा लागेमा रायोको दाना पिसेर यसलाई महमा मिसाई सुँघ्नाले सञ्चो हुन्छ । – पाचनशक्ति...
मंसिर २२, २०७४ शुक्रवार १४:२९:३५
साधरणतया सुक्खा खानेकुरा (ड्राइ फ्रुट) का रुपमा चिनिने ‘नट्स एन्ड ओएल सिड्स’ नेपालमा पहिलादेखि नै प्रयोग गरिआइएको खानेकुरा हो । पूजा, ब्रतबन्धदेखि लिएर विभिन्न चाडपर्वमा चिनारीका रूपमा धेरै प्रकारका ‘नट्स’ हामीले प्रयोग गर्दै आएका छौं । धार्मिक...
मंसिर ९, २०७४ आइतवार ०२:०९:१६
कात्तिक २६, २०७४ आइतवार १२:४४:००
पेटको वरिपरिको बोसोले धेरैलाई तनाव दिएको छ । घटाउने मन हुँदा हुँदै पनि परिस्थिति र समय नमिलेर धेरैलाई समस्या परिरहेको छ । यो बोसो घटाउनका लागि यस्तो चिज जरुरी छ, जसले बढी भन्दा बढी क्यालोरी बर्न गरोस् । केही सजिला तरिकाहरु यसप्रकार छन् । काँक्रो बेलु...
कात्तिक २१, २०७४ मगलवार २०:१४:००
केरा केरामा पोटासियम र कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रामा पाइन्छन् । केरा खानाले शरीरमा सेरोटोनिन नाम गरेको न्युरोट्रान्समिटर बढी उत्सर्जन हुन्छ, जसले तनाव कम गरी मानिसलाई शान्त राख्न मद्दत गर्छ । तनाव छ भने दिनमा दुइटा केरा खाने गर्नुस् । स्याउ स्याउमा फोस्फोरस र आइरन प्र...
कात्तिक ११, २०७४ शनिवार २०:१४:००
ड्राइ फ्रुट कति स्वस्थकर ?
असोज ११, २०७४ बुधवार १८:५२:२८
हरिया र रसिला फलफूल देख्दा जति आकर्षक हुन्छन्, स्वास्थ्यको दृष्टिले उत्तिकै पोषिला पनि हुन्छन् भनेर हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो । त्यसको तुलनामा ड्राइ फ्रुट (सुक्खा फलफूल) को महत्व पनि कम छैन । चाउरी परेका ड्राइ फुट ताजा फलफूलको तुलनामा बढी पोषणयुक्त हुन्छन्। हामी चर्चा ग...
असोज ९, २०७४ सोमवार १२:४४:००
अनुहार तथा हात–गोडाको छाला चाउरी परेपछि हामीमध्ये धेरै अब बुढ्यौलीले छायो भनेर चिन्तित हुन थाल्छौं । छालाको चाउरीपना हटाउन विभिन्न झोल औषधि, भिटामिन र लोसनको प्रयोग गर्न पछि पर्दैनौं । कतिले त शल्यक्रिया नै गर्छन्। यी सबैले चाउरीपना लुकाउन तत्कालका लागि के...
क्वाँटी खानुपर्ने १५ कारण
साउन १३, २०७४ शुक्रवार १६:१९:०७
चार दिन भिजाएर टुसा उम्रेपछी मात्र पकाइने यस्ता परिकार स्वास्थ्यका लागि कति फाइदा जनक छन् त ? यस्ता छन् क्वाँटीका फाइदा : १. कब्जियतको समस्या हटाउँछ । क्वाँटी रेसादार खानाको स्रोत हो २. मधुमेह तथा पायल्स भएका मानिसलाई समेत फाइदा गर्छ । तर मधुमेह भएकाले चिकित्सक तथा...
साउन १३, २०७४ शुक्रवार ११:४४:००
हामीले दैनिकरुपमा विभिन्न प्रकारका फलफूल उपभोग गर्छौं। फलफूल हाम्रो खानाको एक प्रमुख हिस्सा बनिसकेको छ। विभिन्न किसिमका फलफूलमा बेग्लाबेग्लै स्वाद र बेग्लाबेग्लै पोषण तत्व पाइने गर्छ। फलफूलमा मानिसलाई चाहिने भिटामिन र खनिज पदार्थ धेरै मात्रामा पाइन्छ। तर, फलफूलमा पौ...
साउन १, २०७४ आइतवार १६:३२:०२
– हरियो धनिया सुगन्धयुक्त हुने भएकाले यसले खानाको स्वाद बढाउँछ । अरुचिको समस्या भएकाहरूले चटनी अथवा तरकारीमा हरियो धनिया मिसाएर खाँदा राम्रो हुन्छ । – आँखासम्बन्धी सबै किसिमका समस्या भएकाहरूका लागि हरियो धन...